Samsung သည် Note7အကျပ်အတည်းကိုရှောင်ဖယ်နေစဉ် LG သည်ဆက်လက်ကျဆင်းနေသည် Androidsis ပါ
LG ကဆက်လက်ကျဆင်းနေသည့်အတွက် Note7ပြcrisisနာကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်
ဒီနေ့ငါတို့နိုင်ငံကိုသွားဖြစ်တာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ အဓိကစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူနှစ် ဦး သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည် နောက်ဆုံးနှစ်၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအတွက် ၀ င်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းအရ
လူသိနည်းသောသတင်းဆိုးများနှင့် Galaxy Note7ပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်စက်ပစ္စည်းများအကြီးအကျယ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သော်လည်းအမှန်တရားမှာအမှန်ဖြစ်သည်။ Samsung သည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းပြသပြီးအကျိုးကျေးဇူးများကိုမျှော်လင့်နေပုံရသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက်သူတို့ဟာလုံးဝမကောင်းပါဘူး။ ပြောင်းပြန်၊ LG Electronics သည် ၆ နှစ်အတွင်း၎င်း၏ပထမသုံးလပတ်အရှုံးကိုအစီရင်ခံတော့မည်.
စုပေါင်းဒေါ်လာ ၄၄ ဘီလျံဖြင့်ရောင်းချခြင်းဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက်ဒေါ်လာ ၇.၆ ဘီလျံလည်ပတ်မှုအမြတ်ကိုအစီရင်ခံရန်ရှိနေသည်။ ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်တမ်းထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကသုံးလပတ်ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်း၊ Galaxy Note ကို7၎င်းအားသေချာစွာဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကစတုတ္ထသုံးလပတ်အမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၅.၁ ဘီလီယံ (သို့) ယနေ့ထက် ၂.၅ ဘီလီယံလျော့နည်းသည်။ အံ့သြသွားလား။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ဒါကိုငြင်းလို့မရဘူး။ ပြီးတော့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပေါက်ကွဲစေတဲ့ဘက်ထရီပြဿနာတွေကြောင့် Samsung က Galaxy Note 5.100 ကိုအစားထိုးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်၊ နောက်ပိုင်းတွင်ဤအစားထိုးစက်များသည်အငြိမ်းစားယူခဲ့ရသည်၊ terminal ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအားကိုထာဝစဉ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤအခြေအနေသည် Apple ၏ iPhone7နှင့် Google Pixels တို့ကိုစတင်ဖြန့်ချီသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ Samsung ၏အထင်ကရထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Note7ကိုအစားထိုးရန် Galaxy S7 Edge ကိုရွေးချယ်ရန်သုံးစွဲသူများစွာသည်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်.
လူအများမျှော်လင့်မထားသော Samsung ၏အောင်မြင်မှုသည်၎င်း၏တောင်ကိုရီးယားပြိုင်ဘက် LG နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ နှစ်ကုန်တွင်၊ LG သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းဌာနမှဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်အခြေခံအားဖြင့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်မရ။ ၎င်း၏ ၀ င်ငွေသည် ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ပြီးဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံဖြစ်သော်လည်းစတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုဒေါ်လာ ၂၉ သန်းခန့်မှန်းထားသည်။
၎င်းသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်နောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။ လေ့လာသုံးသပ်သူများသည်မိုဘိုင်းလ်ကဏ္ division နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအပါအဝင်အခြားထုတ်ကုန်များရောင်းအားကျဆင်းမှုအပေါ်ဆက်လက်အပြစ်တင်နေကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG ကဆက်လက်ကျဆင်းနေသည့်အတွက် Note7ပြcrisisနာကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်
Alcaltel A3 XL၊ CES 2017 တွင်ပြသခဲ့သောအခြားစမတ်ဖုန်းတစ်ခု